Home » အသားပေး » 2021 အားဖြင့်ပိုက်လိုင်းလွှမ်းမိုးထားသောဗီဒီယို!
လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်းဆက်ဆက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်း၏ဧရိယာ၌ထူးခွားဖွစျလိမျ့မညျနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်တောင်းဆိုချက်များကို၏အမြင့်ဆုံးအပေါ်သက်ရောက်စေမည် အိုင်ပီကွန်ယက် (ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကသူတို့ကိုသိသည်အတိုင်း) ။ ကနေဖြန့်ချိရလဒ်များကိုအဆိုအရ Cisco သည်, မှာ 12th နှစ်ပတ်လည် Visual ကွန်ယက်အဖွဲ့ညွှန်းကိန်း (VNI) အရာ (ထိုကဲ့သို့သောဒေသ, ကိရိယာနှင့်ဆက်သွယ်မှုအမျိုးအစားအဖြစ်အမျိုးအစားတစ်ဦးကိုအရေအတွက်အားဖြင့်) ကိုအင်တာနက်ခြုံငုံကြီးထွားဗီဒီယိုကမ်ဘာပျေါတှငျအခြို့သောအံ့မခန်းတွေ့ရှိချက်ပြစိတ်ပိုင်းဖြတ်! ဒါဟာခန့်မှန်းအားလုံးအင်တာနက်အသွားအလာ 82% တကမ္ဘာလုံးကဗီဒီယိုပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်ပဲ! အခုတော့လက်ရှိမြောက်အမေရိက @ 74% နှင့်လက်တင် Amercia အတွက် 74% @ လူတို့အဘို့, သင့်ကိုဗီဒီယိုအင်တာနက် traffic ကို၎င်းအဆိုအရလာမည့်3နှစ်အတွင်းအကြမ်းအားဖြင့်တစ်ဦး 5% တိုးနှင့်အတူအတော်လေးတူညီဆက်လက်တည်ရှိဦးမည် VNI။ သို့သော်ကြီးမားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Jumper လက်ရှိ 56% ထိုင်နေသည်နှင့် 77 ဖွငျ့% 2021 မှခုန် 62 နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့% 81 မှ 2021% မှာနေထိုင်နှင့်အာဖရိကအလယ်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ဥရောပခဲ့ကြသည်! 2021 အပေါင်းတို့, ဗီဒီယိုကအင်တာနက် traffic ကိုတစ်ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ 80% (ထ 67 အတွက် 2016% မှ) အားဖြင့်ခြုံငုံကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရုပ်ပုံပြုလုပ်ခြင်း။
ယင်းမှတဆင့်ဗွီဒီယိုကိုတွန်းအားပေးနိုင်ဖို့အတွက်သင်တန်း အိုင်ပီအသွားအလာ ဘရော့ဘန်းမြန်နှုန်းမှာ "ယို" အဓိကတိုးမြှင့်သူတို့ကစားသုံးသူသူတို့ကလာမယ့် 27.5 နှစ်ကျော်တောင်းဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းသူတို့ရဲ့ကြွယ်ဝသောမီဒီယာအတွေ့အကြုံကိုပေးကမ်းခြင်း၌ 53Mbps မှ5ကနေနှစ်ဆဟုသတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်လိုအပ်သောများမှာ! တဦးတည်းကအရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ factoid (yeah ငါရှိခဲ့ပါကကမ္ဘာတွင်သိနားလည်နိုင်စွမ်းအတွက်တစ်လလျှင်ဗီဒီယိုငါးသန်းနှစ်သို့မဟုတ်ခန့်မှန်းခြေတစ်သန်းကိုဗီဒီယိုမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်ဖြစ်သော 2021- အားဖြင့်တစ်လလျှင်သုံးထရီလီယံကိုအင်တာနက်ကဗီဒီယိုမိနစ်ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းကြောင်းဖြစ်ပါသည် အဖြစ်ကောင်းစွာနောက်တစ်ကြိမ်ကြောင်းဖတ်ရှုဖို့) ။ (တက် 1.9 အတွက် 2021 ဘီလီယံရှိရာမှဖြစ်လတံ့သော) 1.4 နေဖြင့်မိုဘိုင်းသာကြည့်ရှုချန်လှပ်ထားတဲ့ခန့်မှန်းခြေ 2016 ဘီလီယံခန့်ကိုအင်တာနက်ကဗီဒီယိုသည်အသုံးပြုသူများ!
"ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းစားသုံးသူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဘီလီယံ impact ဆက်လက်အမျှကွန်ယက်နှင့်လုံခြုံရေး, အင်တာနက်ရဲ့အနာဂတ်ကိုထောကျပံ့ဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်" အီ Kanouff, Service Provider စီးပွားရေး, Cisco သည်၏ SVP နှင့် GM ကပြောခဲ့သည်။ "ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်အတူကွန်ယက်ကိုတီထွင်ဆန်းသစ်မောင်းနှင် Cisco သည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောချင်သူကိုသူတို့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များပံ့ပိုးပေးရန်အဘို့, လုံခြုံသော့ချက်ဖြစ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားချိတ်ဆက်အတွေ့အကြုံများကိုပါလိမ့်မယ်။ "
(VR) virtual နှင့်တိုးပွားအဖြစ်မှန် (AR) 1 အားဖြင့်အင်တာနက် traffic ကိုအနည်းဆုံး 2021% ကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ် (အကြမ်းအားဖြင့် 20-ခွံ) ။ ကျွန်မတောင်မှတော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်သောအရာတို့ကိုအမြင်အာရုံပြောင်းလဲနေသောပုံဖော်ဒီဖျော်ဖြေရေးများအတွက်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းပေါ်ဆက်ဆက်ဖြစ်ကြသည် 2031 ဆောင်ခဲ့ဦးမည်အဘယ်အရာကိုစိတ်ကူးမပေးနိုငျသညျ!
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပေးဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါ 2017 ထံမှ Foretasted Key ကိုဟောကိန်းများနှင့်ဗိုလ်မှူးသမိုင်းမှတ်တိုင်များဖြည့်စွက်, 12th နှစ်ပတ်လည် Visual ကွန်ယက်အဖွဲ့ညွှန်းကိန်း (VNI)
2017 VNI ခန့်မှန်းချက် Key ကိုဟောကိန်းများနှင့်ဗိုလ်မှူးသမိုင်းမှတ်တိုင်များဖြည့်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ IP ကို ​​2016 ထံမှ 2021 မှသုံးခြံကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ IP ကိုအသွားအလာတက် 278 အတွက်တစ်လလျှင် 2021 exabytes ရှိလာမှ, 96 အားဖြင့်တစ်လလျှင် 2016 exabytes ရှိလာရောက်ရှိဖို့မျှော်လင့်ရသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ IP ကိုအသွားအလာ 3.3 အားဖြင့် 2021 zettabytes ၏နှစ်စဉ်ပြေးနှုန်းကိုရောက်ရှိဖို့မျှော်လင့်ရသည်။
အလုပ်ရှုပ်နေနာရီသည်အင်တာနက် traffic ကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်အင်တာနက်လမ်းကြောင်းထက်ပိုမြန်တိုးပွားလာနေသည်။ အလုပ်ရှုပ်နေနာရီသည်အင်တာနက် traffic ကို 4.6 အားဖြင့် 35 Tbps ရောက်ရှိတူညီသောကာလအတွင်း 2016-ခြံ (2021 ရာခိုင်နှုန်းကို CAGR) ကြီးထွားမည်ကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်အင်တာနက်လမ်းကြောင်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်, 4.3 အားဖြင့် 2021 Pbps ရောက်ရှိ, 3.2 မှ 26 ထံမှ 717-ခြံ (2021 ရာခိုင်နှုန်းကို CAGR) ကြီးထွားပါလိမ့်မယ် ။
Wi-Fi နှင့်မိုဘိုင်း-connected devices များ 73 အားဖြင့်အင်တာနက်ကိုအသွားအလာ 2021 ရာခိုင်နှုန်းကို generate ပါလိမ့်မယ်
2021 အင်တာနက်ရာခိုင်နှုန်း - Wi-Fi ကို: 53 ရာခိုင်နှုန်းကို; ဆယ်လူလာ: 20 ရာခိုင်နှုန်းကို; fixed: 27 ရာခိုင်နှုန်းကို
2016 အင်တာနက်ရာခိုင်နှုန်း - Wi-Fi ကို = 52 ရာခိုင်နှုန်းကို; ဆယ်လူလာ: 10 ရာခိုင်နှုန်းကို; fixed: 38 ရာခိုင်နှုန်းကို
တကမ္ဘာလုံး, (homespots အပါအဝင်) စုစုပေါင်းအများပြည်သူ W-Fi ကိုဟော့စပေါ့6အားဖြင့်သန်း 2016 မှ 2021 အတွက် 94 သန်းမှ 2016 ထံမှ 541.6 မှ 2021-ခြံကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။
တကမ္ဘာလုံးစုစုပေါင်းက Wi-Fi ကို homespots 85 အားဖြင့် 2016 သန်းမှ 526.2 အတွက် 2021 သန်းကနေကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။
ဦးဆောင်ဟော့စပေါ့နိုင်ငံများတွင်: တရုတ် (170 အားဖြင့် 2021 သန်း), အမေရိကန် (86 အားဖြင့် 2021 သန်း), ဂျပန် (33 အားဖြင့် 2021 သန်း) နှင့်ပြင်သစ် (30 အားဖြင့် 2021 သန်း) ။
2021 အားဖြင့်ပိုမိုချိတ်ဆက်ပြားချပ်ချပ် panel ကတီဗီ၏ထက်ဝက် (56 ရာခိုင်နှုန်း) ထက်4အတွက် 15 ရာခိုင်နှုန်းကနေတက် 2016K ပါလိမ့်မည်
installed / In-service ကို 4K တီဗီ 85 အားဖြင့် 2016M မှ 663 အတွက် 2021M ထံမှတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
ကြိုး-ဖြတ်တောက်ခြင်းအိမ်ထောင်စုအသွားအလာပျမ်းမျှအားအင်တာနက်ကိုအိမ်ထောင်စုထက် 86 ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ပါသည်
"Cord သည်ဖြတ်တောက်ခြင်း" ရိုးရာနှင့် subscription ကိုရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှု ပို. ပို. fixed နှင့်မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်ကြည့်ရှုဖို့မရရှိနိုင်သောထိုကဲ့သို့သောအွန်လိုင်းနှင့်မိုဘိုင်းဗီဒီယိုကအဖြစ်ကိုဗီဒီယိုကြည့်ရှု၏အခြားနည်းလမ်းများ, ဖွငျ့လှညျ့ စား. နိုငျပါခံရထားတဲ့အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
တစ်ဦးကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကြိုး-ဖြတ်တောက်အိမ်ထောင်စုပျမ်းမျှအင်တာနက်ကိုအိမ်ထောင်စုများအတွက်တစ်လလျှင် 117 GB ကိုနှိုင်းယှဉ်, 2017 အတွက်တစ်လလျှင် 63 GB ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။
end-အသုံးပြုသူကအင်တာနက် traffic ကို 2021 အားဖြင့် core ကိုကျော်လွှားမည်အစွန်း-ကျော်အသွားအလာ၏သုံးပုံတစ်ပုံမှပိုမိုနီးကပ်စွာရွေ့လျားနေသည်
တကမ္ဘာလုံးအင်တာနက်အသွားအလာ 35 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တက် 2021 အတွက် 22 ရာခိုင်နှုန်းကနေ, 2016 အားဖြင့်မက်ထရို-to-မက်ထရိုသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
တကမ္ဘာလုံးအင်တာနက်အသွားအလာ 23 ရာခိုင်နှုန်းကို 2021 အတွက် 20 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, 2016 အားဖြင့် (Cross-တိုင်းပြည် Backbones ရဲ့ထိမပါဘဲ) ဒေသဆိုင်ရာ Backbones ရဲ့အပေါ်ကိုသယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည်။
တကမ္ဘာလုံးအင်တာနက်အသွားအလာ 41 ရာခိုင်နှုန်းကို 2021 အတွက် 58 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, 2016 နေဖြင့် Cross-တိုင်းပြည် Backbones ရဲ့ဖြတ်သန်းမည်ဖြစ်သည်။
ကမ္တာ့လုပ်ငန်း SD က-WAN အသွားအလာ
SD က-WAN အသွားအလာရိုးရာ WAN များအတွက်ငါးရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ 44 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦး CAGR မှာကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။
SD က-WAN ခန့်မှန်းချက်ကာလအတွင်းခြောက်ခေါက်နဲ့ 25 အားဖြင့် WAN အသွားအလာ 2021 ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုယ်စားပြုတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
ပျမ်းမျှ DDoS (of Service ကို Distributed Denial) တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခြင်းနှင့်လုံးဝအော့ဖ်လိုင်းအရှိဆုံးအဖွဲ့အစည်းများယူ 1.2 Gpbs-အလုံအလောက်ချဉ်းကပ် SIZE
DDoS ဖြင့်ဖြစ်ရပ်များအများအပြားအိုင်ပီရင်းမြစ်များမှအသွားအလာနှင့်အတူဆာဗာများနှင့်ကွန်ယက် devices တွေကိုရေလွှမ်းသဖြင့်ကွန်ရက်များလေဖြတ်အောင်လုပ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါအထွတ်အထိပ်တိုက်ခိုက်မှုအရွယ်အစားတစ်နှစ်ကျော် 60 ရာခိုင်နှုန်းကိုတစ်နှစ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သူတို့ဖြစ်ပေါ်နေစဉ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့စုစုပေါင်းအင်တာနက်လမ်းကြောင်း၏ရာခိုင်နှုန်းကို 18 မှတက်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
ပျမ်းမျှ DDoS တိုက်ခိုက်မှုအရွယ်အစားအတော်လေးတစ်နှစ်ကျော် 22 ရာခိုင်နှုန်းကိုတစ်နှစ်မှာအင်တာနက်လမ်းကြောင်းကဲ့သို့တူညီသောနှုန်းကိုတည်းဟူသောရာခိုင်နှုန်းကို 29 မှတိုးတက်လာခဲ့သည်။
DDoS တိုက်ခိုက်မှုအရေအတွက် 172 အတွက် 2016 ရာခိုင်နှုန်းကိုကြီးပြင်းခြင်းနှင့်တကမ္ဘာလုံး 2.5 အားဖြင့်သန်း 3.1 မှ 2021-ခြံတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
ဒေသဆိုင်ရာ IP ကိုယာဉ်အသွားအလာကြီးထွားအသေးစိတ် (2016 - 2021)
ပွေး: 107.7 exabytes ရှိလာ / 2021 အားဖြင့်တစ်လ, 26 ရာခိုင်နှုန်းကို CAGR, 3.2-ခြံတိုးတက်မှုနှုန်း
မြောက်အမေရိက: 85 exabytes ရှိလာ / 2021 အားဖြင့်တစ်လ, 20 ရာခိုင်နှုန်းကို CAGR, 2.5-ခြံတိုးတက်မှုနှုန်း
အနောက်ဥရောပ: 37.4 exabytes ရှိလာ / လ 2021, 22 ရာခိုင်နှုန်းကို CAGR, 2.7-ခြံတိုးတက်မှုနှုန်း
ဗဟိုဥရောပ: 17.1 exabytes ရှိလာ / 2021 အားဖြင့်တစ်လ, 22 ရာခိုင်နှုန်းကို CAGR, 2.75-ခြံတိုးတက်မှုနှုန်း
လက်တင်အမေရိက: 12.9 exabytes ရှိလာ / 2021 အားဖြင့်တစ်လ, 21 ရာခိုင်နှုန်းကို CAGR, 2.6-ခြံတိုးတက်မှုနှုန်း
အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာဖရိက: 15.5 exabytes ရှိလာ / 2021 အားဖြင့်တစ်လ, 42 ရာခိုင်နှုန်းကို CAGR, 5.8-ခြံတိုးတက်မှုနှုန်း
Cisco သည် VNI နည်းလမ်း: 2016 မှ 2021 များအတွက် Cisco သည် VNI ™အပြီးအစီးခန့်မှန်းချက်လွတ်လပ်သောလေ့လာဆန်းစစ်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်အမှန်တကယ်ကမ္ဘာကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုမှုဒေတာအပျေါမှီခိုနေရသည်။ ဒီအခြေခံအုတ်မြစ်အပေါ်သို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ IP ကိုအသွားအလာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကလေးမွေးစားခြင်းအဘို့အအလွှာ Cisco ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကအသေးစိတ်နည်းစနစ်ဖော်ပြချက်လုံးဝအစီရင်ခံစာများတွင်ပါဝင်သည်။ ယင်း၏ 12 နှစ်သမိုင်းကျော်, Cisco® VNI သုတေသနကိုအင်တာနက်ရဲ့တိုးတက်မှု၏အလွန်မှတ်အတိုင်းအတာဖြစ်လာသည်။ အမျိုးသားအစိုးရများ, ကွန်ယက်ကိုအားပြိုင်မှု, ပညာရေးသုတေသီများ, ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီများ, နည်းပညာကျွမ်းကျင်သူများနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်း / စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာနယ်ဇင်းနှင့်လေ့လာသုံးသပ်သူများကဒစ်ဂျစ်တယ်အနာဂတျအတှကျအစီအစဉ်ကိုကူညီနှစ်စဉ်လေ့လာမှုအပေါ်အားကိုး။
အဆိုပါ infographics မှဝင်ရောက်ခွင့်ဒီမှာသွားပါ: "VNI အပြီးအစီးခန့်မှန်းချက် Update ကို, 2016-2021"
Cisco က (NASDAQ: CSCO) 1984 ကတည်းကအင်တာနက်ကိုအလုပ်လုပ်ထားပြီးကြောင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနည်းပညာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူများ, ထုတ်ကုန်များနှင့်မိတ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းလုံလုံခြုံခြုံယနေ့မနက်ဖြန်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အခွင့်အလမ်းနှင့်ချိတ်ဆက်သိမ်းယူကိုကူညီပေးပါတယ်။ မှာပိုပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိ newsroom.cisco.com နှင့် @Cisco မှာ Twitter ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ။
Cisco သည်နှင့် Cisco သည်လိုဂိုအမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ် Cisco သည်နှင့် / သို့မဟုတ်အမေရိကန်နှင့်အခြားနိုင်ငံများရှိ၎င်း၏ affiliates ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ Cisco ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်များ၏စာရင်းမှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.cisco.com/go/trademarks.
SoftAtHome, MStar, CES2017 တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် virtual reality	2017-06-13
ယခင်: Westlake Pro ကို JMR, Mac Pro ကို RAID Rackmount Workstation နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလား-Class ကိုအသံဇာတ်စင်ဆောက်
နောက်တစ်ခု: FuseFX နယူးတီဗီစီးရီးနဲ့အတူ Hot လျက်ရှိနေမည်
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "ဗီဒီယို Dominic 2021 အားဖြင့်ပိုက်လိုင်း!" ။ http://www.broadcastbeat.com/video-dominating-the-pipeline-by-2021/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။